चुप लागेर बस्छु भन्ने नसोचे हुन्छ,उचित जवाफ दिन्छु (पूर्णपाठ सहित )
आजको न्युज बिहिबार, मंसिर ४, २०७७, १२:०२:००
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई ‘त्यो प्रस्ताव नै नभएको’ बताएका छन् ।
‘एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन उनले प्रचण्डको प्रस्तावबारे भनेका छन्,त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन ।
त्यसलाई विधिसम्वत प्रस्ताव भन्न मिल्दैन । तर, त्यस सम्बन्धमा कमिटीमा छलफल आवश्यक छ । त्यस्तै ओलीले झूठा अभियोग र लाञ्छनाहरु सहन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, उचित जवाफ दिन्छु भनेर चेतावनी पनि दिएका छन् ।
केहि समयअघि देखि दुइ अध्यक्षबीच शक्ति र सत्ताको बिचमा प्रतिष्पर्धा भैरहेको छ। प्रचण्डले पार्टीमा सह- अस्तीत्व खोजिरहेका छन् भने ओलीले म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने अहमता देखाइरहेका छन्।
हिजो सम्पन्न सचिवालय बैठक पनि यस्तै बिषयमा छलफल हुँदै १० दिन पर सारिएको छ। बैठकमा दुवै पक्षले आफ्नो आफ्नो धरान राखेका छन्।
म एक दुईवटा कुरा राखौं । अस्तिको बैठकमा केही कुराहरु जस्तोकि बैठकको एजेण्डाको रुपमा होइन, पत्राचारका रुपमा, जस्तोकि पाँच जना साथीहरुले मलाई बैठक बोलाइयोस् भनेर पत्र दिनुभयो । त्यसमा गम्भीर आरोपहरुसमेत भएको हुनाले मैले बैठक बोलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, ती आरोपहरु अनुत्तरित हुन पनि सक्दैनथे । मैले त्यसको जवाफ किन दिनुपर्यो ? वास्तवमा ती आरोपहरु सही थिएनन्, अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण थिए, तिनको बारेमा मैले स्पष्ट पार्नु नै जरुरी थियो । त्यसकारण मैले व्यक्तिगत तवरमा नै अगुवाई उहाँको भएको हुनाले अर्का अध्यक्षलाई पत्र लेखें । र, त्यस पत्रको जानकारी बोधार्थका रुपमा पत्र बुझाउन आउने साथीहरुलाई त दिएँ नै, अरु साथीहरुलाई पनि जानकारीका लागि दिएँ । त्यसको प्रत्युत्तरमा चाहिँ अर्को ७ पेजको जवाफ अर्का अध्यक्षले लेख्नुभयो । त्यसको जवाफ मैले दिएको छैन । स्वभाविक रुपमा त्यसको पनि उचित जवाफ दिनुपर्ने छ ।
मैले अस्ति दुई जना कमरेडहरुलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ र भनेँ कि यसको छिनोफानो नभइकन, यी आरोपहरुसहित, यी आरोप बोकी बोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन । यी आरोपहरु या त त्यसबाट बदर हुनुपर्यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्यो र ती पदहरु र ती जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्यो। यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो । तर, यसपटक हट्ने आधारहरु यी हुन्, यसकारण हट्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन । तर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा रहेको छ । त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ । यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ । यो आरोप या त सदर ठहरिनु प¥यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नु प¥यो । यो आरोप सही ठहरिंदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनु प¥यो, यसको जवाफदेही लिनुप¥यो ।
म के भन्न चाहन्छु भने, मिलेर मात्रै पार्टी बचाउन सकिन्छ । लडेर पार्टी बच्दैन, जालझेल र तिकड्म गरेर पार्टी बच्दैन । गुटबन्दी गरेर पार्टी बच्दैन । सबै कुराहरुमा पछि छलफल गरौंँला । आजचाहिँ म त्यो लाञ्छनापत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोपहरु, अभियोगहरु, लाञ्छनाहरु, तिरस्कारहरु, अपमानहरु सबैलाई खारेज गर्छु । र, यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई म पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रुपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु । मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पुर्यायो भनेर माधब कमरेडलाई भनेँ । उहाँले अँ धम्काउने ? धम्काएर कोही डराउँदैन भन्नु भयो । अब डराउने खालको त यहाँ कोही छजस्तो लाग्दैन । माधब कमरेड मात्रै नडराउने होइन, अरु पनि कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छेहरु कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । तर सबै सुरैसुरा हुँदाखेरि सुरैचाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन ? फेरि पनि विचार गर्न मेरो आग्रह छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ४, २०७७, १२:०२:००
नेकपामा अहिले कल्याङकुलुङ मात्रै बढी भएको हो, केही हुनेवाला छैन